Sida loogu habeeyo Walaalaha leysarka daabacan ee Linux | Laga soo bilaabo Linux
Inta badan qeybinta hadda ee GNU / Linux waxay leeyihiin taageero weyn oo ku saabsan qalabka casriga ah, si kastaba ha noqotee, weli waxaa jira qaar ka mid ah soo saareyaasha qalabka ee ka hortagaya hal dhinac ama qaab kale oo ah in nidaamkayaga qalliinka ee aan jecel nahay uu la jaan qaadi karo xalkooda. Nasiib wanaag dad badan, tani maahan kiiska kuwa naga mid ah oo adeegsada daabacadaha magaca Walaalka maadaama ay leeyihiin wadayaal u dhashay Linux.
Waxaan hadda haystaa Walaalka DCP-L2550DN daabacaha leysarkaMaaha inay tahay daabicis cajaa’ib leh laakiin haddii ay ii ogolaato inaan si dhakhso leh u daabaco, oo tayo wanaagsan leh lanana kulmo qiimaha, sidoo kale way fududahay in la helo Walaal qiimo jaban TN2410 iyo TN2420 cartridges, kuwaas oo ah kuwa ay qalabkani adeegsadaan. In Linux Mint waxaan ku sameynayaa wax aad u fiican, in kasta oo markii aan cunayay macaan aan waxyar ka yaraaday sidii caadiga ahayd si aan awood ugu yeesho inay shaqeyso, markaa way fiicantahay in la sharaxo nidaamka ay isticmaalayaasha qalabka la midka ahi ay tahay inay sameeyaan.
Waxa ugu horreeya ee adeegsadayaasha leh daabacadaha astaantan ay tahay inay sameeyaan waa inay tagaan walaalka Linux Linux darawallada oo soo dejiso darawalada nooca daabacaadda gaarka ah, waxaa loo qaybiyaa qalabka kala duwan ee ay shirkaddu u qaybiso (CUPS, LPR, Scanner, ADS, laser printers, kuwo kale). Qeyb kasta oo darawallo ah waxay na siisaa xalka alaabada la xiriirta, taasi waa sababta, tusaale ahaan, isla darawalku wuxuu u shaqeyn karaa Walaalka DCP-L2510D, Walaalka HL-L2310D iyo Walaalaha MFC-L2710DN.
Walaal wuxuu nagu siinayaa boggeeda rakibaadda darawal buug gaar ah oo loogu talagalay isticmaalka iyadoo loo eegayo sida loo qeybiyo, qaabka qalabka iyo qaab dhismeedkiisa, si la mid ah, waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan awoodno inaan hubinno hawlgalka saxda ah ee daabacaha, qaabeynta nooca warqada ama xitaa xaalada kaydadkaaga.
Nidaamka guud ahaan waa mid fudud, waxaan u tagnaa Walaalka darawallada bogga, waxaan soo dejineynaa darawalka la jaan qaadaya qalabkayaga iyo distro-keena, kuna rakib xirmooyinka aasaasiga ah amarka soo socda:
Kadibna waxaan dib u bilaabi doonnaa pc-keena, waxaanna ku rakibeynaa darawalada maaddaama bogga taageerada Walaalku uusan tilmaamaynin, xaaladaha qaarkood waa inaan tagnaa qaybta Nidaamyada / Maamulka / Daabacayaasha (sida ku habboon ee aad disto ku leedahay) oo aan u dooranno daabacaha aad hadda rakibtay sidan ayaan ku awoodi doonnaa inaan u isticmaalno daabacadeena asal ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loogu hagaajiyo daabacadaha Walaalka laser-ka kumbuyuutarka
Waxaan u adeegsadaa walaal dcp 7065dn manjaro gnome darawallada waxay ku jiraan AUR.
Daabacayaashani badanaa waxay leeyihiin darawallo rpm iyo deyn loogu talagalay archlinux iyo wax soosaarayaasha ayaa caadi ahaan ku jira AUR iyo gentoo waxaa jira walaac walaal ah.
Wadayaashu miyay bilaash yihiin softiweer - il furan?
Ku jawaab DAC
Xaaladdan oo kale waa wadayaal Linux ah, laakiin ilaha lama heli karo (ma ahan il furan), nasiib daro
Waxa ay dhahaan, ugu yaraan Walaal ayaa ka taageero badan Ricoh. Waxaan haystaa Ricoh multifunction SP310spnw oo aad ufiican, laakiin markay timaado ku adeegsiga Linux waxay siinaysaa madax xanuun badan, waxaadna isticmaali kartaa oo kaliya qaybta daabacaadda. Taageerada Ricoh ficil ahaan wax jira ma ahan, in kastoo loo maleynayo inay leedahay darawallo Linux ah, markii la doonayo in la rakibo waxay bixinaysaa qalad, maxaa yeelay ... CUPS ayaa socda !!! Waxaan haystay muddo ku dhow hal sano inkasta oo aan isla markiiba e-mayl u diray Ricoh oo aan ka codsanayo inay raadsadaan hab lagu abuuro darawallo ku habboon, illaa maantadan la joogo xitaa ma aysan qiran inay heleen emailka. Waa inaan isticmaalo OS kale si aan awood ugu yeesho iskaanka.
Ku jawaab Barbara
Waxaan u isticmaalaa wifi Walaal aad u qaali ah HL-2135W wifi waana ku fiicneyd Linux sanado. Aad u faraxsan.
Puigdemont 64bit dijo
1210w waxaa lagu rakibay iyadoo la isticmaalayo pkgbuild-ka duugoobay oo wax laga badalidoono, waxaa ka dhimanaya xigashooyin yar, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa.
Jawaab Puigdemont 64bits
Ha iibsan Walaal, iibso HP, waana sharxi doonaa sababta: Haa, waxay leeyihiin darawallo GNU / Linux, laakiin iyagu waa lahaansho. Hadday X sano ka dib joojiyaan cusbooneysiinta darawaladooda cusub iyo markay shaqada joojiyaan, way kaa tegayaan adiga oo jiifa oo cidina ma awoodo inay wax ka beddesho koodhka sababta oo ah ma lihin. Shaqada waxaan u isticmaalnaa Walaalka DCP7065dn.
Sidoo kale ka taxaddar HP maxaa yeelay waxay kaloo leedahay madbacado aan lahayn darawallo bilaash ah, sida HP LaserJet Pro CP1025nw. Iibso kaliya kuwa haysta darawallo bilaash ah si looga fogaado baadda mustaqbalka si aad u iibsato madbacad cusub ama liisanka cusub ee Windows ama Mac OS (oo ay had iyo jeer u leeyihiin darawallo).
Ha ku iibsan xaalad kasta oo daabacan SHARP, waxaan haynaa MX 2310U copier / printer: marka hore rakibayaasha darawalkiisa ee Linux (http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/centro-de-descargas.htm?p=&q=MX-2310U&lang=ES&cat=0&type=1214&type=1215&os=&emu=) wuxuu hayaa khaladaad badan oo fayl bedelid ah oo nagu qasbaya inaanu taabno qoraalka si aan si fiican u shaqeyno, tan labaad waxaan ku haynaa shabakad lagu habeeyay lambarka isticmaale ee shaqaale kasta waxaana soo baxday in darawalka Linux uusan haysan meel uu dhigo lambarka ( gudaha Windows haa ee Maareynta Shaqada - Xaqiijinta Isticmaalka - Isticmaalaha). Markaa kama isticmaali karo GNU / Linux, waxaanan isku dayay tabaha sida beddelka feylka PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) iyo xitaa iskuday darawalka adeegsanaya injineernimada roon ee sirta (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Amarka doorbid: HP oo leh darawal bilaash ah, HP oo leh darawal lahaansho, Walaal leh darawal lahaansho, sinaba uma jabin
Waxay ubaahan yihiin binary inay shaqeyso, tusaale ahaan walaalka dcp 7065dn oo ah inaan isticmaalo qayb ka mid ah darawalka hadii uu yahay softiweer bilaash ah laakiin wuxuu ubaahan yahay walaal binary oo aan bilaash aheyn.
Iska ilaali inaad iibsato madbacado bilaa darawallo bilaash ah, haddii kale waxay ku jiraan gacanta shirkadda wax soo saarta haddii aysan cusbooneysiin darawalkeeda isla xilliyada nidaamka aad ku shaqeyso, waxay kugu qasbi doontaa inaad iibsato nidaam kale ama madbacad kale.
HP leh darawalo bilaash ah ayaa kafiican, iska jir inay jiraan HP oo wata darawallo lahaansho sida HP LaserJet CP 1025nw, Walaal kuligood waxay leeyihiin darawal lahaansho laakiin ugu yaraan way jiraan. Waxaa ka sii daran SHARP koobiyeyaasha-daabacayaasha oo darawalkoodu u yahay GNU / Linux uusan laheyn xulashooyin sida inaad dhigto nambarka laguu qoondeeyey inaad ku daabacato shabakada, taas oo ka hortageysa isticmaalkeeda Linux hadii shirkadu rabto inay maamusho nuqulada uu sameeyay mid walba, tusaale ahaan Sharp MX 2310U oo aanan xitaa ku guuleysan inaan ka dhigo madbacada mid shaqeynaya adoo wax ka bedelaya PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) ama darawal injineer gadaal ka ah (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Galab wanaagsan. (Maalin, habeen, iwm.) Qof ma igu hagi karaa rakibidda iyo qaabeynta skaan-daabaceyaasha daabacadaha shabakaddan? ama ii sheeg meesha aan ka heli karo macluumaad dheefshiidka ka hor. Meeshii aan ka shaqeeyo, dhowr nooc oo walaalo ah oo badan oo walaalo ah ayaa la istcimaalaa oo qaabeynta daabacaha marka wadayaasha la rakibo waa fududahay, laakiin mararka qaarkood nidaamka (guud ahaan zorin os 9 lite) wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa qaar ka mid ah iskaanrada shabakada, laakiin waqtiyada kale maahan. Waxaan jeclaan lahaa qof inuu ii sheego sida gacantan loogu daro iskankan (sida loogu sheego in lagu aqoonsado qalabka wax lagu barto ee leh IP gaar ah). Waan baaray waana tan ugu badan ee la gaadhay ay tahay in magaca iskaanka leh ip uu ka muuqdo liiska iskaanka fudud laakiin waxba lama iskaan. Wax la mid ah ayaa sidoo kale igu dhacaya aniga oo leh samsung multifunctions, laakiin kuwani waxay u muuqdaan inay ka muuqdaan liiska jilitaanka si ka badan kuwa walaalka ah. Aniga ayay igu dhacdaa in PC uu ogaado qalabka wax lagu baadho oo midka ku xiga aanu ogaanayn; maadaama ay isku shabakad yihiin.
Ku jawaab Koopa
Hal su'aal, waa doqonimo maxaa yeelay mar hore ayaan ogaaday laakiin si fiican, waan weydiin doonaa, ma ogtahay haddii daabacayaasha Lexmark (Z11 LPT iyo X75 all-in-one) ay si sax ah uga shaqeeyaan Linux? wixii aan raadiyey, waxba ma jiraan haba yaraatee, Ubuntu 9.10 the Z11 way shaqeysay, iyadoo gelisay dufan hore ma shaqeyn doontaa?
Waad salaaman tihiin dadka
PS: way caytami karaan, waan uqalmaa 😉
Iskuday tan: ku rakib Ubuntu 9.10 sanduuqa kumbuyuutarka oo isku day inaad halkaas ku daabacdo illaa daabacaaddaada. Haddii ay shaqeysay, waxaad isku dayi laheyd inaad shabakadda ka wada wadaagto Linux-kan ilaa Linux-kaaga si aad uga daabacato kaaga ama aad ugu daabacdo pdf-kaaga oo aad u dhigto pdfs-ka si aad ugu daabacdo galka la wadaago ee u dhexeeya labada nidaam si aad uga qaadan karto Ubuntu 9.10
Taasi waa dhibaatada wadayaasha lahaanshaha, waxay ku dhacdaa si isku mid ah Windows, waxaad wax ku iibsatay 15 sano ka hor Windows XP mana jiro darawal win7 ama 10 ah.
Weligaa waligaa ha ku iibsan wax darawallo lahaansho leh haddii ay wax ka jiraan tartanka darawallada bilaashka ah, si fiican u dooro
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxaan jeclaan lahaa haddii mar dambe aad sameysid cashar ku saabsan sida loogu xiro daabacaha walaalka wifi ... kiiskeyga waa MFC9330CDW. Waad ku mahadsantahay horay
Waxaan hayaa Walaal HL-L2340DW waana ku xiraa iyada oo loo marayo Wifi. Si loogu xiro daabacaha USB ma jirin wax dhibaato ah, laakiin ma shaqeyn karin Wifi.
Walaal wuxuu ku siinayaa, ugu yaraan Ubuntu, wax la yiraahdo Driver Install Tool, oo u maleynaya in isticmaalaha kaligiis (ama ku dhowaad, wax ay tahay inuu sameeyo) darawallada lagama maarmaanka ah. Dhibaatadu waxay tahay inaad ogaato sida loo sameeyo. Xaaladdayda, markaan socod ku dhex maray Google in yar, waxaan arkay inuu Walaal halkan kugu sharxayo:
Dhibaatadu waxay tahay ogaanshaha waxa cadaabta ah ee lagu ridayo URI ... Marka, anigoo sii wadaya raadinta, waxaan ka helay jawaabta faallo uu siiyay jose1080i cayiman maqaalkan:
Si fiican looma sharixi karo.
Kama shaqeyneyso dhammaan qaababka Walaal, sax? Waxaan hayaa leesar madow iyo cadaan oo jid majiro
Waxaan u isticmaalaa Linux Mint 19 Cinnamon 64-bit, waxaan iibsaday Walaalka HL-1110 daabacaadda halbeegga leysarka iyo ka dib markaan kululaysto qalbigeyga (wuxuu marayaa USB) halkii Wifi, waxay u muuqaneysaa maamulka oo xitaa dhaqaajineysaa dukumiintiyada laakiin way soo baxayaan iyagoo maran, waayo waxa ay tahay inaan haysto «windols»-ka si loo sameeyo daabacado, halka ay si fiican ugu socoto.
Jawaab Enrique Gallegos
Tiknoolajiyada bilaashka ah waxay kordhisaa saameynta ay ku leedahay khamaarka internetka iyo sharadka